देउवालाई बास्कोटाको जवाफ : नाकाबन्दीमा म्याउँ गर्न नसक्ने, अहिले ढाडे बन्ने ? – Buddha Khabar
By Buddha Khabar on Nov 24, 2019
हाम्रो भाषा लर्बरिँदैन देशभक्तिको प्रश्नमा । नाकाबन्दीमा एक शब्द बोल्न नसक्ने, म्याउँ गर्न नसक्ने अहिले चाहिँ चुनाव आयो भनेर ढाडे बनेर कुर्लिएर हुन्छ ? चुनाव हार वा जितसँग यस्ता विषय ल्याएर जोड्नु हुँदैन ।onlinekhabar
Author BUDDHA KHABARPosted on November 16, 2018 124	0
Author BUDDHA KHABARPosted on November 16, 2018 51	0
मकवानपुर, ३० कात्तिक । भाद्र २४ गते आइतबारबाट अवकाश पाएका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले जाँदाजाँदै अकुत सम्पत्ति जोडेको प्रमाण भेटिएको छ । क्षेत्रीले कमाएको अकुत...
Author BUDDHA KHABARPosted on November 16, 2018 50	0
काठमाडौं , ३० कात्तिक । सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चार दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २२ वटा निर्णय...
Author BUDDHA KHABARPosted on November 16, 2018 56	0